धरानमा जारी गोधुली कपमा १३ र १८ नं. वडा विजयी – KhabarPurwanchal
धरानमा जारी गोधुली कपमा १३ र १८ नं. वडा विजयी
खबर पूर्वाञ्चल, २७ पुष २०७८, मंगलवार २०:४०
धरान / धरानमा भइरहेको गोधुली फुटबल रनिङ्ग कप अन्तर्गत आज भएको खेलमा धरान १३ र १८ विजयी भएका छन् ।
आज भएको पहिलो खेलमा धरान–१३ ले धरान ७ विरुद्ध फराकिलो जित हात पारेको छ । १३ नं. वडाले ७–० गोल अन्तरको जित निकाल्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । खेलको ७ ओैँ मिनेटमा धरान १३ को तर्फबाट बिवेक राई बि र खेलको २२ ओैँ मिनेटमा मिलन लिम्बुले गोल गर्दै पहिलो हाफमा १३ नं. वडा २–० गोल अन्तरले अघि थियो ।
दोस्रो हाफमा १३ नं. वडाले गोलको वर्षा नै ग¥यो । खेलको ४७ ओैँ मिनेटमा बिवेक राई ए ले गोल गरे । लगत्तै परिवर्तन श्रेष्ठले अर्काे गोल थपे । उनले खेलको ५४ ओैँ मिनेटमा गोल गरेका थिए । खेलको ६५ ओैँ मिनेटमा मन्दिप राईले गोल गरे भने निशान श्रेष्ठले निरन्तर २ गोल गरेपछि खेल ७–० गोल अन्तरको स्थितिमा टुङ्गिएको थियो । खेलको म्यान अफ द म्याच धरान १३ का मिलन लिम्बू घोषित भएका थिए । उनले मेडल र १ हजार ५ सय नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसै आज भएको दोस्रो खेलमा धरान १८ धरान ५ लाई १–० गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा निर्धारित समयसम्म दुबै टोली तर्फबाट गोल हुन सकेन । खेलको ईन्ज्युरि समयमा धरान १८ को तर्फबाट निकेश राईले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाए । उनले पेनाल्टी क्षेत्रबाहिर पाएको फ्रिकिकको अवसर सदुपयोग गर्दै गोल गरेका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच पनि गोलकर्ता निकेश नै घोषित भएका थिए । उनले मेडल र नगद १ हजार ५ सय पुरस्कार प्राप्त गरेका छन ।
माघ २ गते नै फाइनल हुने
सरकारले कोरोना भाइरस फैलन सक्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा भीडलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेसँगै गोधुली क्लबले पनि माघ २ गते नै फाइनल खेल गरेर प्रतियोगिताको अवधी छोट्याएको छ ।
माघ ८ गते फाइनल हुने तालिका बनाएको भए पनि नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै माघ २ गते नै फाइनल खेल हुने क्लबले जनाएको छ । जस अनुसार अब दैनिक ४ वटा खेल हुने भएको छ । भोलीको पहिलो खेल धरानको वडा नं. ९ र ८ बीच विहान ८ बजे हुने भएको छ । त्यस्तै दोस्रो खेल विहान ११ बजे धरान–१५ र १० नं. वडाबीच हुने भएको छ । त्यस्तै तेस्रो खेलमा धरान–१७ नं. वडा र ११ नं. वडाले दिउसो ११ बजे प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका छन् भने भोली हुने अन्तिम खेल दिउसो ३ बजे धरान १९ र २० बीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।